Mark Henry - wrestling American, wrestling professional, weightlifter futhi powerlifter. Ababili-Olympic iqhawe (1992 no-1996) Weightlifting (sosondonzima). Ilungu le-Pan American Imidlalo ngo-1995, lapho kwaba iqembu US won endaweni yokuqala, futhi uMarku ngokwakhe unqobile zethusi, isiliva negolide izindondo eziningi. Ngenxa powerlifter, wayengumuntu iqhawe emhlabeni e WDFPF version ngo-1995, futhi ezimbili ngesikhathi United States National Champion ngo-1995 no-1997 ..
Mark Henry - athlete kuphela emhlabeni, naye kwadingeka isihloko iqhawe e eyala ezemidlalo ezifana weightlifting futhi Powerlifting. Kukhula umsubathi 193 cm, nesisindo - 191 kg. Mark ungumnikazi ngokuphelele irekhodi lomhlaba pauerliftinge (ngaphandle asebenzise imishini ethize): squats - 430 kg. Henry has amandla angaphezu kwavamile: ukukhinyabezeka kwayo isisindo ongafinyelela afinyelela ku-800 kilograms. Ngo-1996, i-wesibhakela American wajoyina WWE ukuzijabulisa inkampani yomphakathi wahlanganyela ukuqaliswa izinyathelo wrestling. Ngo-2011, waba WWE emhlabeni sosondonzima iqhawe.
Biography American "sosondonzima"
Mark uHenry wazalwa ngo 12.06.1971 emzini Silsbee, Texas (United States). Ngiseyingane, wayengumuntu umlandeli omkhulu we-mpi, futhi u-Andre NOGOLIYATHI sasibhekwa njengophawu lokuthi umlingisi esithandayo. Ngiseyingane, waba nethuba uthinte isithombe, lapho Beaumont (Texas) wathatha abalandeli ku ephasishi wrestling indandatho. Mark uHenry wayefuna ukufinyelela Andre NOGOLIYATHI, kodwa Wakhutshwa phezu isivimbezelo wawa ezinyaweni fighter French. Mark Andre akhushulwe isixuku futhi unyakaziswa emuva phezu kocingo.
Lapho uMarku 12, kwashona ubaba wakhe Ernst, ngubani inesifo sikashukela. Lapho ngineminyaka engu-14, uHenry kwatholakala ne-dyslexia.
Mark livela umndeni lapho cishe bonke abantu abane ngalokhu usayizi umxhwele. Umalume wakhe Chudd ngesikhathi ukukhula 205 ngamasentimitha kuhlaziywe 226 kilograms. Akunakwenzeka ukuthenga izicathulo evamile ezitolo ezivamile. Ngenxa yokushoda usayizi oyifunayo kwadingeka ukuba enze konke okusemandleni ukuze oda. Chudd Umalume wazo wabe esaziwa ngokuthi abantu eziqine futhi esinamandla kunazo East Texas.
Mark uHenry vs. Big Show
Ngo-2011, unyaka ekubambaneni show "Revenge" (efanele ngifuna restlerskoe show, WWE aphethwe inhlangano), uHenry wayesenze ukuvikela isicoco sakhe sivukele uPawulu Randall Wight (isidlaliso: "Giant," "Big Shou"). I iziqubu kwakujabulisa futhi kumnandi, ngisho amadoda waphula iringi. Nokho, umphumela impi akuyona ezamenyezelwa, futhi isihloko ubuqhawe uhlala Mark uHenry.
Ngemva kwesikhathi esithile, kwi-wrestling show "Owasinda Series" (November izenzakalo kusukela WWE), ukuphikiswa heavyweights futhi. Lesi sikhathi, uHenry futhi Chet bavikela isicoco sakhe emhlabeni. Phakathi wrestling show, yena waba isafaneleka njengamaLevi ngoba buhlungu olungcolile e imbilapho. Ethukuthele ngalesi senzo, Big Show okuphindaphindiwe kusiza nge uHenry lokuthi wayeseholela ukuzama kuso izinyanga eziyisithupha ezedlule, nokubamba Brand unyawo sezinyawo, Big Show wagxuma bonke isisindo ku abaphikisi, kanjalo bakuthumela Knockout. Ngemva kwemizuzu embalwa bethandazile Mark uHenry wathi konke wamuka emva ukushaqeka enjalo, futhi wangena iringi futhi. Ukubona abaphikisi ngezinyawo zakhe, Big Show waphuma emsamo, futhi futhi akhishwe weightlifter wangaphambili.
Armbar - ngempumelelo ubuhlungu reception
Uhlelo "Turbo Hamster" - amazwana kusukela ochwepheshe